Banijya News | कोरोनाको अवधिमा विदेशबाट १ लाख नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ? - Banijya News कोरोनाको अवधिमा विदेशबाट १ लाख नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ? - Banijya News
कोरोनाको अवधिमा विदेशबाट १ लाख नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?
असोज २६, काठमाडौं ।
कोरोनाकै अवधिमा विदेशबाट १ लाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीका बीच खाडी मुलुकसहित विश्वका ५९ मुलुकबाट आइतबारसम्म १ लाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म १ लाख २ हजार ४ सय ३६ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । फर्किने मध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडी मुलुक तथा मलेसियामा पुगेका नेपाली श्रमिकहरु रहेका छन् ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी २९ हजार ४३२ जना युएइबाट फर्किएका छन् । यस्तै साउदी अरबबाट १५ हजार ६४७, कतारबाट १६ हजार ३४०, कुवेतबाट ९ हजार ५२०, मलेसियाबाट १४ हजार ७१०, बहराइन बाट १३ सय ९९ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
यो अवधिमा अस्ट्रेलियाबाट १२ सय ३५ जना स्वदेश फर्किएको उल्लेख छ । ओमानबाट १६ सय ३९ जना र दक्षिण कोरियाबाट १८ सय ११ जना फर्किएका छन् । त्यस्तै माल्दिभ्सबाट १ हजार १८ जना फर्किएकोमा छिमेकी देश चीनबाट ४२३ जना , बङ्गलादेशबाट ९३० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
कोरोनाभाइरसका कारण उडान प्रभावित भएपछि सरकारले उद्दार उडान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस्तै पछिल्लो समय स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर नियमित उडानमार्फत समेत नेपाल आउन अनुमति दिएको छ । अनुमति दिएसंगै हाल सम्म सिगांपुरबाट ८ सय २३ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ६०५ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
जोर्डनबाट ५ सय ७७ जना स्वदेश फर्किएका छन् । यस्तै, पाँच सयभन्दा कम नेपाली स्वदेश आएकोमा थाइल्याण्ड ३ सय २६ रहेका छन् । त्यस्तै इराक, स्विजरल्याण्ड, इरान, ईथोपिया लगायतका देशबाट एक सयभन्दा कम सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किएका हुन् ।